San Htun's Diary: December 2018
ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်မှာ ဖိနပ်ကို ညီညီညာညာချွှပ်ဖို့ ၊ ထမင်းစားရင် အသံပျပ်ပျပ် မမြည်စေနဲ့ ၊ ဟင်းချိုသောက်ရင် ရှူးရှူးအသံ မမြည်စေနဲ့ ၊ ထမင်းစားတဲ့အခါ မဖိတ်စေနဲ့ ၊ ခြေနင်းတာ ဖွဖွလေးနင်းဖို့ ၊ တံခါးတွေပိတ်တဲ့အခါ အသံမမြည်စေဖို့ ၊ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ယူဖို့အမြဲဆုံးမတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ လိုက်နာပါတယ်။ ဂျပန်အိမ်မှာတုန်းက အိမ်ရှင်ကောင်လေးဟာ မနက်၁နာရီလောက် အိမ်ပြန်ရောက်လို့ချက်ပြုတ်ရင် နံရံကပ်ဗီရိုတံခါးကို တအားဆောင့်ပိတ်လေ့ရှိတယ်။ တံခါးဆောင့်ပိတ်သံကြောင့် တခါတလေ အိပ်ယာက လန့် နိုးတယ်။ နယူးဂျာဆီအိမ်မှာတုန်းက ကိုယ့်အိပ်ခန်းအပေါ်ထပ်က တရုတ်မဟာ ည ၁၁ နာရီခွဲလောက် ပြန်ရောက်တယ်။ ခြေနင်းသံပြင်းလွန်းလို့ကိုယ့်ဘေးနား လာလျှောက်နေသလား ထင်ရတယ်။ အိပ်ယာကနေ လန့် နိုးတယ်။ ခဏနေရင် တရုတ်မအိပ်မှာပါဆိုပြီး သည်းခံနေတာ။ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိ ခုံရွှေ့ သံ၊ ခြေနင်းသံ တဒုန်းဒုန်း တော်တော်နဲ့ မအိပ်။ သည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံး အောက်ကနေ တံမြက်စည်းနဲ့တဒုန်းဒုန်းထု။ တံမြက်စည်းနဲ့တဒုန်းဒုန်းထုနေတာကို သိရဲ့ လားမသိ။ နောက်ဆုံး တရုတ်မက ငြိမ်သွားလို့ လား ကိုယ်တို့ ကပဲ တအားအိပ်ချင်နေလို့ လားမသိ အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အိမ်ရှင်ကို တရုတ်မပြန်လာရင်သိတယ် ဟိုးအဝေးကြီးကနေ ခြေနင်းသံကြားရတယ်။ ခြေသံပြင်းလို့အိပ်လို့ မရဘူးလို့တိုင်လိုက်တယ်။ အိမ်ရှင်ပြောလို့ နဲ့တူပါရဲ့အခန်းထဲမဝင်ရင် ဖိနပ်ချွှပ်သံ ကြားရတယ်။ ခုအိမ်မှာလည်း အိမ်ရှင်လာရင် ခြေနင်းသံခပ်ပြင်းပြင်း ကြားရတယ်။ တော်သေးတာက အိမ်ရှင်က တပတ်မှာတရက် ခဏပဲလာလို့ ။ တရားစခန်းဝင်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မနက်လေးနာရီလောက်ကတည်းက ခြေနင်းသံ တဒုန်းဒုန်းကြားရလို့နိုးတယ်။ လူသေးသလောက် ခြေနင်းသံကြမ်းတဲ့ အန်တီကြီးကို ဒေါ်ဒုန်းလို့နာမည်ဝှက်ပေးထားတယ်။ ရုံးကမန်နေဂျာမဟယ်လင်လည်း မိုက်ခရိုဝေ့၊ အိမ်သာတံခါး၊ အခန်းအဝင်ကတံခါးတွေကို ဆောင့်ပိတ်တာများ လန့် စရာ။ အတော်ကြမ်းတမ်းတဲ့ မိန်းမ။ ခြေသံပြင်းပြင်း၊ တံခါးဆောင့်ပိတ်သံတွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတော့ ခြေသံမပြင်းဖို့ ၊ တံခါးဆောင့်မပိတ်ဖို့တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြည်မိတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈။
ကိုယ့်ပို့ စ်နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ သဘောကျလို့ 
ကိုယ်တို့ ညီအစ်မတွေ ပြောကြတာက ရုံးသွားရင် ပိုကျန်းမာတယ်။ ရုံးပိတ်ရက် အိမ်မှာနေရင် မကျန်းမာဘူး။
မနက် ၆ နာရီကနေ ၇ နာရီအထိ တရားထိုင် (မိနစ် ၂၀ လောက်ထိုင်ပြီး ပြန်အိပ်နေတာ ခပ်များများ)။ ရေချိုး ၇ နာရီ ၄၀ ဆို အိမ်ကထွက် ငှက်တွေကို အစာကျွှေး။ အိမ်ကနေ ဘူတာရုံကို ၁၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်ရတယ်။ ဘူတာရုံမှာ ရထားပထဆုံးတွဲ အထိရောက်အောင် ၅ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်။ ၇ နာရီ ၅၅ မိနစ်မှာလာတဲ့ R ရထားပထဆုံးတွဲစီး။ စာဖတ်၊ မျက်စိညောင်းရင်အိပ်။ ဘူတာရုံကနေ ရုံးကို ၁၀ မိနစ် လမ်းလျှောက်ရတယ်။ ၈ နာရီ ၅၀ ဆို ရုံးရောက်ပြီ။ ၉ နာရီကနေ ၉ နာရီခွဲအတွင်း မနက်စာစား။ ၂ နာရီတခါ ရေဘူးရေဖြည့်၊ ရှူးရှူးပေါက်။ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ဖိစီးတိုင်း ရေနင်းကန်သောက်၊ အသီးတွေစား။ နေ့ လည် ၁၂ နာရီဆို ဗိုက်ကတဂွီဂွီ မြည်လာပြီ ပရိုဗိုက်ရိုတစ်ဆေးသောက်။ ၁၂ နာရီခွဲဆို ထမင်းစားပြီ ဗိုက်ဆာနေတော့ ဟင်းမကြိုက်ဘူး မစားချင်ဘူး လုပ်လို့ မရဘူး အကုန်စားတယ်။ ဖေ့ဘွတ်ကြည့် နွေတုန်းကဆို နေ့ လည် ၁ နာရီကနေ ၁ နာရီ ၂၀ အထိ ဝေါစထိလမ်း၊ ထရစ်နစ်တီဘုရားကျောင်းဖက် မိနစ် ၂၀ လမ်းလျှောက်တယ်။ ခုတော့ အေးလွန်းလို့အပြင်မထွက်တော့ဘဲ ဖေ့ဘွတ်ကြည့်တယ်။ နေ့ လည် ၂ နာရီကနေ ၃ နာရီကြား အသီးတွေစား။ ညနေ ၅ နာရီဆို ရုံးဆင်း အိမ်ကို ၆ နာရီခွဲလောက်ရောက်တယ်။ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မိနစ်လောက်လုပ်၊ ပန်းသီးရှလကာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းကို ရေတဖန်ခွက်နဲ့ သောက်။ ညစာချက်ပြုတ် ထမင်းဘူးပြင်။ ဟင်းဝယ်နေကျ အန်တီကြီးက မြန်မာပြည်ခဏပြန်သွားတော့ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်နေရတယ်။ စားချင်တာလေးတွေချက် ချက်ပြီးရင်မစားတာက ခက်တယ်။ ကိုယ့်နေရာကိုလာပြီး တရုံးလုံးကြားအောင် အော်ဟစ်ဆူပူတဲ့ အင်မတန်ရိုင်းပျတဲ့ မန်နေဂျာမကို သူဋ္ဌေးဆီသွားတိုင်။ သူဋ္ဌေးက ခေါ်ဆူတော့ ကိုယ့်ကိုအညှိုးထားပြီး ပညာပြနှိပ်စက် မလုပ်မထွက်ထွက်အောင် လုပ်နေတဲ့ မန်နေဂျာမကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲပြီး လုပက်ပြန်ဖြစ် ပေါင် ၂၄ ပေါင်ကျတယ်။ ပါးစပ်ပျက်လို့အစာစားချင်စိတ်မရှိ စားချင်တာလေးတွေ ရှာဖွေစားသောက်ပြီး ကျန်းမာအောင် ကြိုးစားနေထိုင်ပါတယ်။
တပတ် ၃၊ ၄ ရက် မိနစ် ၂၀ လောက် တယောတီးလေ့ကျင့်။ သတင်းတွေကြည့် ည ၁၀၊ ၁၀ နာရီခွဲလောက်ဆို မျက်ခွံပိတ်ကျလာပြီး ခေါင်းကဒေါင်ချာဆိုင်းနေပြီ မအိပ်လို့ မရတော့ဘူး။ လုပက်စ်ကြောင့် ပင်ပန်းနွယ်နယ်မှု fatigue ဖြစ်တယ်။ တော်သေးတယ် insomia အိပ်မပျော်တာမဖြစ်လို့အိပ်လည်းမပျော် စားလည်းမစားဆိုရင် မလွယ်ကြောဘဲ။
မနက် ၆ နာရီ အိပ်ယာထ၊ ၇ နာရီ ၄၀ ငှက်တွေကို အစာကျွှေး။ အလုပ်လျှောက်၊ အင်တာဗျူးဖြေဖို့စာကြည့်၊ အဝတ်လျှော်၊ နေ့ လည်တရေးတမော အိပ်ချင်အိပ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ စာဖတ်၊ စာရေး၊ တယောတီးလေ့ကျင့်။ အဖေ့လို အိမ်ရှုပ်ပွရင် မနေတတ်သူမို့ လို့တပတ်တခါ၊ ၂ ပတ်တခါ အိမ်ရှင်း။ ခန္ဓာကိုယ်က လှုပ်တောင်မလှုပ်လို့ဗိုက်မဆာ ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှစား ဝမ်းမမှန်။ နေ့ လည်စာနဲ့ညနေစာ ပေါင်းစားဖြစ်တာများတယ်။ နွေရာသီတုန်းက တရက်အပြင်ထွက်၊ တရက်အိမ်မှာနေပေမဲ့ ခုဆောင်းရာသီမှာ အပြင်မထွက်ဘဲ အိမ်မှာနေတာများတယ်။ ရာသီဥတုက အေးလွန်းတဲ့အပြင် ကိုယ်ကလည်း တနာရီလောက်ပဲ လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်။ ၁၁၀ ပေါင်ပဲရှိလို့အားနည်းတယ် ပုံမှန်အလေးချိန် ၁၂၄ ပေါင်ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ မကြီးဆို ပေါင် ၁၀၀ ပဲရှိတယ် ဘယ်လိုများနေတယ်မသိ။ ကိုယ်ကတော့ ပေါင် ၁၁၀ ကိုတောင် အားနည်းနေတယ် ထင်နေလို့ ။ ကိုယ်က ဘယ်တော့မှ ပိန်ခဲ့တဲ့သူမဟုတ်တာကိုး။ ကိုယ်က မော်ဒယ်လေးလို ပိန်ပိန်လေးဆိုတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထက် မော်ဒယ်သန္တာလှိုင်လို တောင့်တောင့်တင်းတင်း ကျစ်လစ်သန်မာ ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကို သဘောကျတာ။ အရင်လိုဒေါင်ဒေါင်မြည် ၈မိုင် တောင်တက်နိုင်ဖို့အချိန်ယူရဦးမယ်။
ရုံးတက်ရက်ဆို ၃ မိုင် တနာရီ မဖြစ်မနေ လမ်းလျှောက်ရတယ်၊ ရှူးမှန်မှန်ပေါက်တယ်၊ ရေများများသောက်တယ်၊ ဝမ်းမှန်တယ်၊ စားချိန်အိပ်ချိန်မှန်တယ်။ ရုံးပိတ်ရက်ဆို တမိုင်တောင် လမ်းမလျှောက်ဖြစ်၊ ဝမ်းမမှန်၊ စားချိန်အိပ်ချိန်မမှန်။ အဲ့ဒါကြောင့် ပြောပါတယ် ရုံးသွားရင် ကျန်းမာပါတယ်လို့ ။ ကျေးဇူးတော်နေ့ဈေးချလို့fibit alta hr ဝယ်ဖြစ်တယ်။ ဝိုင်းကလည်း fibit charge2ဝယ်တယ်။ သူ့bpm နှလုံးခုန်နှုန်းက ရုံးပိတ်ရက်ဆို ၇၀ ကျော်တယ် ရုံးတက်ရက်ဆို ၈၀ ကျော်တယ် မကောင်းဘူးတဲ့။ ကိုယ့် bpm နှလုံးခုန်နှုန်းက ၆၀ - ၆၉ ကြားမှာရှိလို့ကောင်းတယ်တဲ့။ စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းလို့၂ နာရီတခါ မျက်စိမှိတ်ပြီး ဝင်ထွက်ထွက်လေ ၁၀ခါလောက် မှတ်တာကိုး။ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့ စဉ်လှုပ်ရှားမှု daily activities ကို ဖစ်ဘစ်ကနေ စစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဝိုင်းကတောင်ပြောတယ် မင်း ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှ လုပ်စရာမလိုဘူး ရုံးသွားနေရင်ကို ကျန်းမာတယ်တဲ့။ ၂၀၁၅ လုပက်စ် အတော်ဖြစ်တုန်းက ကိုယ့်ကို ရုံးမသွားဘဲ အိမ်မှာအနားယူဖို့မိတ်ဆွေတွေက အကြံပေးတယ်။ အိမ်မှာနေရင် ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက် ပိုပြီးနာကျင်ကိုက်ခဲ စိတ်ဓာတ်ပိုကျတယ်။ ကွတကွတ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ရုံးသွားရင် နာကျင်တာတွေကို မေ့ပျောက်လို့ပိုကျန်းမာတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပဲသိတယ်။ ဒီပို့ စ်ဖတ်ပြီးရင် ရုံးသွားဖို့ မပျင်းတော့လေမလား...
ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၈။
၂၀၁၈ မတ်လ ကိုစကာရီကာနိုင်ငံ မုတ်သုန်သစ်တောထဲမှာ ငှက်ကြည့်ပြီးကတည်းက ငှက်တွေကို ချစ်သွားတယ်။ ငှက်တွေကို အစာကျွှေးချင်ပေမဲ့ ငှက်အစာကျွှေးတဲ့အိမ်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်။ တနေ့Wallgreens မှာ ငှက်စာတွေ့ လို့ဝယ်လာပြီး မနက်တိုင်း အိမ်ခေါင်းရင်းက မြေကွက်လပ်မှာ ကျဲချပေမဲ့ ငှက်တွေလာစားတာလည်း မတွေ့ ဘူး။ တပတ်လောက်ကြတော့ ကိုယ်အစားကျွှေးတဲ့အချိန် မနက် ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ် စာကလေးငှက်တွေ လာစောင့်နေတာတွေ့ တယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားရင် ပျံပြေးကြတယ်။ Daylight Saving စတဲ့နေ့အချိန်တနာရီ နောက်ဆုတ်လိုက်တော့ အရင်ကျွှေးနေကျအချိန်ထက် တနာရီနောက်ကျပြီးမှ သွားကျွှေးတော့ ငှက်တွေမတွေ့ ဘူး။ နောက်နေ့ဇွဲကောင်းတဲ့ငှက်ကလေးတချို့စောင့်နေကြတယ်။ ကိုယ်အစာကျွှေးဖို့ လာတာကိုမြင်ရင် နီးစပ်ရာသစ်ပင်တွေကနေ ပြေးလာကြတယ်။ တချို့ ငှက်တွေက အသံပေးပြီး သူ့ အဖော်တွေကို ခေါ်တတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုမကြောက်ကြတော့ဘူး ကိုယ့်နားအထိလာပြီး ကြိုတတ်ကြတယ်။ ရုံးတက်ရက် ရုံးသွားတဲ့အချိန် မနက် ၇ နာရီ ၄၀ အိမ်ကထွက်ရင်း အစာကျွှေးလေ့ရှိတယ်။ ရုံးပိတ်ရက်မှာတော့ မနက် ၇ နာရီ ၄၀ နှိုးစက်ပေးပြီး ငှက်တွေအစာကျွှေးတယ်။ မနက်တိုင်း ငှက်ကလေးတွေ အစာစားနေတာကို မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈။
ကိုယ်အနားယူတဲ့အချိန်တွေမှာ နားထောင်လေ့ရှိတဲ့ Relaxation Music တွေ။
နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ ကိုယ့်အသက် ၃၅ နှစ်ပြည့်ပြီ။ ၂၀၀၈ မေလ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်တုန်းက ဟိုင်းကြီးကျွှန်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်မိဘတွေ တိမ်းပါးသွားရင် ဒုက္ခပါပဲလို့ တွေးတဲ့ မိန်းမငယ်လေးကနေ အတော်အတန် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ မိန်းမကြီးတယောက် ဖြစ်လာပြီ။ ဒုက္ခတွေကိုလည်း ဘာလဲဟဲ့ လောကဓံလို့ခါးဆီးခံနိုင်ပြီ။ လစာများများ ရတဲ့အခါ ငါကွလို့မာန်တက်ဖူးပြီ။ အလုပ်ပြုတ်တဲ့အခါ ငါ့ကျမှ ကံဆိုးလိုက်လေခြင်းလို့ဝမ်းနည်းပက်လက် ငိုကြွေးခဲ့ဖူးပြီ။ အကြီးကြီး ပေးဆပ်ရတဲ့ အမှားတွေလည်း မှားခဲ့ဖူးပြီ။ အမှားတွေဆီက သင်ယူတတ်ခဲ့ပြီ။ ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ခွဲခွာရလို့ငိုကြွေးခဲ့ဖူးပြီ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါ ငါ့ကျမှ ဖြစ်ရလေခြင်းလို့မချိတင်ကဲဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီ။ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ကူညီစောင့်ရှောက်မှုကိုလည်း ရရှိဖူးပြီ။ နင့် မျက်နှာကို တသက်မမြင်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောသွားတဲ့သူငယ်ချင်းကို ရေစက်ကုန်သွားပြီလို့သဘောထားနိုင်ပြီ။ ပညာပြနှိပ်စက်တဲ့ မန်နေဂျာမကိုလည်း ဟိုဘဝက ဝဋ္ဋ်ကြွေးရှိလို့ဆပ်နေရတာလို့တွေးတတ်နေပြီ။ ကိုယ်ဘာမှလုပ်လို့ မရ ကံတရားလက်ထဲမှာ ရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘုရားရိပ်၊ တရားရိပ် ခိုလှုံတတ်ပြီ။ မွေးနေ့ ကိတ် တခါမှမခွဲဖူးသူမို့ လို့မွေးနေ့ ကိတ်ခွဲဖို့ ကိုလည်း တခါမှမတွေးဖူးခဲ့။ မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပေးမဲ့သူဆိုလို့ဝိုင်းတယောက်ပဲ ရှိပေမဲ့ ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးတူမီ၊ မယ်ရီခရစ်စမတ်တူမီ၊ ဟတ်ပီးနယူးယားတူမီ၊ ငါလေးဟာ အတော်ပင်ပန်းတာပဲ ဆုချဦးမှဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကုိုယ်ပြန်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေက ခပ်များများ။ မျှော်လင့်ထားတာတွေ ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားတာပဲ ဖြစ်မလာတာ ကံတရားလို့ဖော့တွေးတတ်ပြီ။ ဖေ့ဘွတ်မှာလည်း မျက်စိရှုပ်တဲ့သူတွေကို အန်ဖရင့်၊ မျက်စိနောက်တဲ့သူတွေကို အန်ဖော်လိုး။ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက် ကလက်တက်တက် ဝတ်စားပြီး ကလေးကလားပုံတွေကိုလည်း အားနာပါးနာနဲ့လိုက်ခ်မပေးဘူး။ အသက်ကြီးလာလို့ လား မသိဘူး ဆူဆူညံညံ သီချင်းတွေကို နားထောင်လို့ မရတော့ဘူး နားအေးပါးအေး နေချင်မိတယ်။ အရင်လို အလုပ်တွေကို တရစပ်တခါတည်း အပြီးမလုပ်တော့ဘဲ နားနားပြီး လုပ်တတ်ပြီ။ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းနည်းနည်း၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရှိနေရင် လုံလောက်ပြီ။ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတာမို့စာတွေဖတ်ပြီး ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ မနက် ၆ နာရီ ၇ နာရီအထိ နှိုးစက်ပေးထားပေမဲ့ နာရီဝက်လောက် တရားထိုင်ပြီး ပြန်အိပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ပြင်ရဦးမယ်။ ဓာတ်ပုံပညာစာအုပ်ဖတ်ပြီး နားလည်သလိုလိုနဲ့မလည်တာတွေကို သေသေချာချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရဦးမယ်။ တယောဘိုးတံထိုးတဲ့အခါ လက်ချောင်းတွေကို အသုံးမပြုဘဲ လက်ကောက်ဝတ်ကို အသုံးပြုပြီး သက်တောင့်သက်သာ ညင်ညင်သာသာ ထုိုးတတ်ဖို့လေ့ကျင့်ရဦးမယ်။ အေကြိုးကို ဘိုးတံထိုးတဲ့အခါ ဒီကြိုးကိုသွားထိမိပြီး နှစ်သံထွက် လက်မငြိမ်တာတွေ လေ့ကျင့်ရဦးမယ်။ သူများအထင်ကြီးဖို့ ၊ သူများလုပ်လို့လိုက်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြီး ဘဝကိုအဓိပ္ဗာယ်ရှိရှိ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေသွားဖို့ က အရေးအကြီးဆုံးပဲ မဟုတ်လား။
Be strong. Be yourself. Be independent. Don't listen other people's judgements.
Travel more. Read more. Learn something. Follow your dreams. Never give up your dreams.
Happy belated birthday to me !
ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈။
၁၂၄ ပေါင် ၁၀ ပေါင်ချထားတဲ့အချိန် ခုတော့ မန်နေဂျာမ နှိပ်စက်လို့ ပေါင် ၁၁၀ ပဲ ရှိတော့တယ်